China Ji Nei Jin ရိုးရာတရုတ်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ ကြက်သား၏ Gizzard ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |အကောင်းဆုံး
Ji Nei Jin ရိုးရာ တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ
တရုတ်အမည်- ji nei jin
အင်္ဂလိပ်အမည်- ကြက်၏ အမြှေးပါး
လက်တင်အမည်- Polygonatum odoratum Mill။မူးယစ်ဆေးဝါး
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်- Gallusgallusdomesticus Brisson
ကြက်အရေခွံ၊ တရုတ်ဆေးအမည်။Gallusgallusdomesticus Brisson ၏ခြောက်သွေ့သောသဲအိတ်၏အတွင်းနံရံဖြစ်သည်။ကြက်များကိုသတ်ပြီးနောက် gizzard ကိုထုတ်၊ အတွင်းနံရံကိုချက်ချင်းအခွံခွာ၊ ရေဆေးပြီးအခြောက်ခံပါ။ဤထုတ်ကုန်သည် အထူ2မီလီမီတာခန့်ရှိသော ပုံမှန်မဟုတ်သော လှိမ့်ထားသော တက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သည်။မျက်နှာပြင်သည် အဝါရောင်၊ စိမ်းဝါရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင် အညိုရောင်ဖြစ်ပြီး ပါးလွှာပြီး ကြည်လင်တောက်ပကာ သိသာထင်ရှားသော အမြှေးပါးအစင်းကြောင်းများရှိသည်။ဖြတ်ပိုင်းအပိုင်းတွင် ကြွပ်ဆတ်၊ ကျိုးလွယ်သော၊ ချိုမြိန်ပြီး တောက်ပြောင်သည်။အနည်းငယ်ငါးခြောက်၊ ခါးအနည်းငယ်။
အစာမကြေခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းနှင့် ဝမ်းလျှောခြင်း၊ မွေးကင်းစကလေးအာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ enuresis၊ spermatorrhea၊ stranguria နှင့်နာကျင်မှု၊ သည်းခြေရည်ထိန်းခြင်းနှင့် hypochondriac နာကျင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
1. ရေငတ်ပြေအောင် နေ့တိုင်း ကျောက်တလုံးလောက်ရောက်ရင် နာနတ်သီးရဲ့ အမြစ်နဲ့ ကြက်သားရဲ့ ဂျစ်ဆာအရေခွံနဲ့ ညီမျှတယ်။ထမင်းအချိုရည်အတွက် တစ်ရက်သုံးရက်။("အတွေ့အကြုံပါတီ")
2. ကျိုင်းနာများ- ကြက်သားကို မီးရှို့ပြီး သုတ်လိမ်းပါ။("အသက်ရှင်ခြင်းနှင့် လူငယ်စာအုပ်သစ်")
3. အရေပြားယားယံခြင်း- ကြက်သားပေါက်စ (ရေထဲမကျသွား) ကို သန့်စင်အောင်သုတ်ပြီး ကြွေပြားအသစ်မှာ ဖုတ်ပြီး ကြွပ်ရွနေကာ မီးကြောင့် အဆိပ်သင့်ပြီး ကောင်းမွန်ပါသည်။အနာစိမ်းများကို ဆန်ဆေးရည်ဖြင့် ဆေးကြောသော်လည်း ၎င်းတို့ကို လိမ်းပေးပါ။ခံတွင်းအနာတွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။("အတွေ့အကြုံပါတီ")
Decoct, 3-10g;ကြိတ်ပြီးနောက် တစ်ကြိမ်လျှင် 1.5 ~ 3g ယူပါ။ကြိတ်ချေခြင်းရဲ့ အာနိသင်က ဖျော်ရည်ထက် ပိုကောင်းပါတယ်။
ယခင်- Pi Pa Ye ရိုးရာတရုတ်ဆေး Loquat Leaf
နောက်တစ်ခု: Huo Ma Ren ရိုးရာ တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ လျှော်စေ့
San qi 100% သန့်စင်သော သဘာဝ ယူနန် panax nooginse...
Da Yun ရိုးရာတရုတ်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ...
Mei Gui Qie လက်ကားတရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြည့်စွက်...
Hua Jiao အသစ်ရောက်ပြီ Sichuan ငရုတ်ကောင်းစေ့ခြောက်...